family with love: အမှတ်တရ ဟိုအရင်က မြန်မာငွေ(၁၊၅၊၁၀)
Everyone has our own family. F= Father A= And M= Mother I= I L= Love Y= You မိသားစုတိုင်း အေးချမ်းသာယာကြပါစေ
အဘွားရဲ. သိမ်းထားတဲ့ ဟိးုအရင်က ပိုက်ဆံလေးတွေ က ကျမထက် အသက်ပို ကြီးနေလို. အမှတ်တရ အနေနဲ. ခွင့်တောင်းပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့တယ်။ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ မြင် ဖူးအောင်လို. ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၂၀၁၂ နှစ်သစ်နှင့်အတူ ကျမ္မာခြင်း၊ပျော်ရွှင် ခြင်းများ နဲ. ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
Posted by FAMILY at Saturday, December 24, 2011
မှတ်သားဖွယ်ရာ စာရေးချင်တဲ့လူတွေအတွက် လူထုဒေါ်အမာသတိပေးချက်
ကိုယ့်စာနဲ.လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းကိုမကောင်းမရေးပါနဲ့။အဲ့ဒါမရေးအပ်တဲ့စာ၊ မလုပ်အပ်တဲ့အလုပ်မျိုးပါ။မင်းလူတစ်ယောက်ကို မကျေနပ်ရင်ထဆဲပါ၊ထထိုးပါ။ရတယ်။ မင်းဒေါသကြီးတာမရှက်တတ်တာကိုကြားတဲ့မြင်တဲ့ လူလောက်ပဲ သိတယ်။စာနဲ့ရေးပြီးဆဲတယ်ဆိုတာကတော့ မင်းစာကိုဖတ်မိသမျှလူတွေကသိတယ်။မင်းစာမဆွေးမြေ့ မပျက်ဆီးသေးသမျှ အဖတ်တင်နေမယ်။သူ့. အပေါ်မင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာ ကဗျည်းထိုးမော်ကွန်းတင်ထားတာပဲ။
စာဖတ်တာက်ု စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်မှာလက်ရှိနေနေပါတယ်။သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလဲ တိုးပွားချင်ပါတယ်။ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ၊ မြန်မာပြည် က မြန် မာလူမျိုးများအားလုံး အစစအရာရာအဆင်ပြေ ကြပါစေ။မိမိဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တိုင်းကိုအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းနိုင်ပါစေလို..ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စကားလက်ဆောင် ပြောခဲ့နော် အားရှိတာပေါ့
Latest Activity on အဖြူရောင်မေတ္တာလူငယ်များ
Thanks to my Pa Pa and May May that we got happy family. We are not rich person. But we got happy life and happy family.